China TQSF Series Gravity Destoner Kugadzira uye Fekitori | Chinatown
TQSF yakateedzera giravhiti destoner yekuchenesa zviyo, Kubvisa dombo, Kugadza zviyo, Kubvisa kusvibiswa kwechiedza zvichingodaro.
TQSF Series Giravhiti Destoner
TQSF Series Gravity Destoner yekuchenesa zviyo, Kubvisa dombo, Kugadza zviyo, Kubvisa kusvibiswa kwechiedza zvichingodaro.
Uyu wekuparadzanisa dombo ane hukuru hwekuparadzanisa kuita. Inogona kubvisa matombo emwenje muhukuru hwezviyo kubva mukuyerera kwezviyo, ichiita mupiro mukuru mukuwana zvigadzirwa zvakakwana kusvika kune inoenderana chikafu hutsanana.
Izvo zvinhu zvinowira pamusoro petafura yekuburitsa kubva mukati uye inovhara zvakaenzana pahupamhi hwesefa yekumusoro nekuda kwekudengenyeka kwechiitiko chemuchina. Iko kusanganisa kunoitwa kwekudengenyeka uye kuyerera kwemhepo zvinoita kuti zvinhu zviri pamusoro soro ive yakarongedzwa otomatiki zvinoenderana neyakajeka simba uye granular saizi. Chiedza chemwenje chinova overtails yesosi yepamusoro uye yakaburitswa kunze kwemuchina kubva kumuchina muswe. Zvimwe zvinhu zvakareruka senge mashanga uye guruva zvinotorwa kubva kune chinoshuvira chokubuda. Zvinhu zvinorema pamwe nematombo uye jecha zvinowira pane nesefa yepasi kuburikidza nesefa yekumusoro. Sezvinoitwa nemuchina vibration, kuyerera kwemhepo uye kukweshera, zvinhu zvinorema zvinonanga kumuswe wemuchina uye kuburitswa kubva kumuswe kuburitsa jecha nematombo zvichienda kumusoro wemuchina uye kuburitswa kubva kubwe. Kubudikidza nemahwindo ekucherechedza, mushandisi anogona kunyatso tarisa mhedzisiro yekuisa uye kuisa mabwe.
- Iyo yekusefa bhokisi iro rinowanzo kutakurwa nemaviri-masheya masefa anotsigirwa nemhango yerabha zvitubu uye inokonzerwa kudedera neumwe kana maviri vibrator zvinoenderana nekugadzirwa kwemuchina.
- Kuti uwane dhigirii yakanakisa yekuparadzanisa uye kusarudzika, iyo mafungiro esefu, vhoriyamu yemhepo pamwe nekuparadzanisa kwekupedzisira zvinogona kugadziridzwa zvinoenderana.
- Mushini wekutsvaga wakanakira kubvisa mabwe kubva kuhova yezviyo inoenderera
- Pahwaro hwekusiyana kweimwe giravhiti, kubviswa kweakawanda-simbi tsvina sematombo, ivhu uye zvidimbu zvesimbi negirazi zvinoitwa.
- Seimwe yeanonyanya kuzivikanwa ekuchenesa zviyo michina, inoshandiswa zvakanyanya mune yakasvibirira yekuchenesa chikamu muupfu zvigayo, mupunga zvigayo, zvidyiwa zvigayo uye mbeu inogadzira fekitori.
1) Yakavimbika uye yakanakisa kupatsanura uye kuuraya matombo.
2) Kushushikana kwakashata, hapana guruva rinobuda.
3) Yakakwirira chinzvimbo.
4) Easy oparesheni uye kugadzira.
Iyo yepamusoro sefa ndiro:
Zvikamu zvitatu zvema skrini zvine maburi akasiyana saizi zvinoshandiswa kugadzirisa otomatiki kupatsanura zvinhu.
Pazasi nesefa ndiro:
Iri kushanda pamusoro pebvise ibwe nehunyanzvi hwekuita.
Kuchengeta nesefa kubva pakuvharira nekuchenesa nesefa zvinobudirira.
Amplitude uye skrini yekona chiratidzo:
Iyo amplitude uye skrini kona inogona kugadziriswa zvinoenderana nechiratidzo.
Wind musuo kugadzirisa:
Vhoriyamu yemhepo inogona kugadziridzwa zvinoenderana nehunhu hwehunhu, kuti uwane mukana wakanaka wemagumo